ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Kantabon !ပြင်ဆင်
Person's names suggestပြင်ဆင်
RMaung (WMF) ၁၉:၀၁၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
enwiki မှာထက် ဒီမှာပြောရတာ အန္တရာယ်ကင်းမယ်ထင်လို့ပါ ဆရာရေ။ ဆရာ နေ့လယ်က Min Aung Hlaing နဲ့ တခြားဆောင်းပါးတွေမှာ SAC က dissolve မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီး လာပြင်တာ ကျနော်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကို Tartan ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ပိုင်းဆောင်းပါးတွေကို patrol လုပ်နေတဲ့သူက မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြန်ပြင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာ ပိုပြီး strong and reliable ဖြစ်မဲ့ citation လေးတွေ ထည့်ပေးစေလိုပါတယ်။ အခု အဲဒီကိစ္စက နည်းနည်းလေး ပြဿနာတက်နေလို့ပါ။ ကျနော်ကလဲ အဲဒီအပိုင်းတွေ သိပ်မသိတော့လေ။ ကျေးဇူးပါ။ Htanaungg (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၂၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
အချက်အလက်များပြန်လုပ်ပါ ("ယှဉ်ပြိုင်မှုများ"ဖတ်ပါ "ဆုတံဆိပ် မှတ်တမ်း"ဖတ်ပါ)၊ မသက်ဆိုင်သောအင်္ဂလိပ် link ကျေးဇူးပြု၍ စည်းကမ်းချက်ကိုဖတ်ပါ။ ဒါတွေလက်မခံဘူး Jebat2 (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၀၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
ကြူကြူလှပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီချုပ်၏ ဇနီး လို့ရေးတော့ ဘာလို့လဲ? နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ရေးဖို့က သူ့လင် ကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ အသိအမှန် ပြုမထားသလို။ သူဖာသာ ဖန်တီးယူထားတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၈၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
အစ်ကို ပြောတဲ့စာအုပ်တွေ သားမှာ မရှိဘူးဗျ။ download ဆွဲပြီး ဖတ်ဖိုကျတော့ computer က ဟမ်းနေတယ်။ ဖုန်းကလည်း screen သေးနေတယ်။ မျက်မှန်လည်းတပ်တယ် ဆိုတော့ အမေက ဖုန်းနဲ့ မဖတ်ခိုင်းဘူး။ ဦးနု ရဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် ၅နှစ်ရာသီ ဗမာပြည် နဲ့ တာတေ စနေသား တော့ရှိတယ် အစ်ကို။ အဲ့ စာအုပ်တွေဆို အဆင်ပြေ မလား။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၃:၂၂၊ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန မှာ ဘယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကိုမှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ ၂ဘက်လုံးက ခန့်ထားသူတွေကို ရေးတာဟာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၆၊ ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
မဂ်လာပါဗျ။ ကျနော် မင်းအောင်လှိုင် မှာ ရေးထားတာတွေကို နောက်ပြန်ပြင်လိုက်တယ် ဆိုတာသတိထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကို က နောက်ပြန်ပြင်ရတဲ့ အကြေင်းအရင်းကို မပြောခဲ့ပါဘူး? ကျနော့်ရဲ့ ရေးသားမှုဟာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မေတာကြေင့်ပြန်ပြင်ရတယ် ဆိုတာလဲ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြပြီးတော့ လုပ်ရတဲ့ အကြေင်းအရင်းကို ပြောပြပါ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၁:၀၂၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar
January 8th 2022ပြင်ဆင်
အရင်အကောင့်မှာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာတော့ကျနော်လဲသိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်က အရင်တုန်းကလို ပေါက်ကရတွေရေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၁၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar
ပေါက်ကရရေးဖို့အစီအစဉ်ကတော့လောလောဆယ်မရှိပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် အရင်ကရေးခဲ့တာတွေကို လည်း နောင်တရပါတယ်။ "နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ခန့်ပြီး ဝန်ထမ်းဆောင် နေသည်"လို့ရေးတာကို အပေါစားဆန်တယ်လို့ထင်ရင်တော့ ကျနော်လည်း လောလောဆယ် ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ စကားလုံး စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ခန့်တယ်ဆိုတာကတော့ english wikipedia မှာ self appointed လို့ရေးထားတာကို ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ မကြိုက်ရင်တော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၅၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar
၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။